"Ọ ka nwetara anwansi ahụ" - cheapinternetsecuritysoftware.com
By Mildred Coleman On June 11, 2021 No Comments
Onye nnọchi anya gọọmentị GrosvenorSport.com Jamie O’Hara ekwuola okwu banyere England n’ihu onye mbido Euro 2020, onye kpakpando mbụ Premier League na-ekpughe onye ọ chere na ọ ga-abụ isi ma ọ bụrụ na England ga-eweta bọọlụ n’ụlọ.
O’Hara na-ekwukwa banyere onye otu ya na Harry Kane, ọkachasị gbasara ebumnuche ya na ọgbakọ ya na ọdịnihu nke mbụ Grosvenor Sport blog or
Grealish nwere ike ime ihe anyị na-ahụbeghị kemgbe Gazza
Echere m na nke a bụ oge Jack Grealish igosi n’ezie ihe ọ nwere ike ime na nnukwu ogbo, o doro anya na ọ na-alọghachi site na mmerụ ahụ, ọ pụkwala nwa oge, mana ọ ga-adị ọhụụ maka ya ma ọ gaghị enwe ụkwụ ike gwụrụ .
Ofdị agwa Grealish bụ na ọ ga-adị njikere karịa ịga, echekwara m na ọ nwere ike ịme ihe na European Championship nke afọ a anyị ahụbeghị kemgbe Paul Gascoigne. Ọ dịghị ihe ọ bụla ọ na-eme na olulu ahụ ga-eju m anya, ọ bụ naanị aka anwansi ahụ.
Enwere ike ikwu otu ihe ahụ maka Phil Foden mana ndị mmadụ amatalarị ihe ọ nwere ike, na anyị niile enweela ọ beenụ na ihe ọ na-eme na Manchester City ebe Grealish bụ nnukwu amaghị.
Harry Kane ga – emeri Golden Boot ma ọ bụrụ na ọ nwere ike izere ịnyefe nkọwa
Harry Kane ga – emeri akpụkpọ ụkwụ ọla edo, ọ bụ ebe England nọ dị ka nọmba 9, ndị otu ga – egwuri egwu na ya ga – enwe ọtụtụ ohere. Aga m aga n’ihu ịsị na ọ ga-agbaji akara goolu England niile.
Otú ọ dị, akụkọ gbara ya gburugburu na-achọ ịfefe na Tottenham enweghị ike ịbịa n’oge ka njọ. Ọ ga-abụ ihe ga-ekokwasị ya n’elu asọmpi a niile ma kpọọ n’azụ uche ya.
Ọnọdụ kachasị njọ bụ ma ọ bụrụ na otu klọb debanye aha mmasị maka ya n’etiti asọmpi, anyị kwesịrị ya ka ọ lekwasị anya na ọrụ dị na England ka m wee nwee olileanya na ọ gaghị emetụta ya ma ọ nwere ike ịga nweta Golden Buut.
Anyị ga-enwetakwu ihe na Jamie na Euro 2020 niile, ọ ga na-ewerekwa ụfọdụ ndị asọmpi Scottish n’ụdị Open Goal Podcast. Guysmụ okorobịa ahụ ga-alụ ya na EurDecision, egwuregwu amụma amụma Grosvenor Sport na-akwụghị ụgwọ ebe a ga-akwụ ụgwọ ego ,000 60,000 maka oge okpomọkụ a. Banye!
Tags:ahụ anwansi nwetara ọ
Ọ na-agan’ekwughị na asọmpi egwuregwu bọọlụ Euro 2020 ga-abụ ụzọ …
Nanị Usoro Ntanetị Online nke Na-arụ Ọrụ
Ọ bụ ihe dị mma n’oge a maka ndị na-agba …
Bụrụ onye Gentleman na SlotsMillion
Nke a bụ usoro mkpọsa cha cha ọhụrụ maka izu …